कृ र सत्रुगतेका गीतमा बलिवुड प्रभाब – khabarxpress.com
समाचार २०७४, २० पुष बिहीबार १२:५७
कृ र सत्रुगतेका गीतमा बलिवुड प्रभाब
के टाईगर र दिशाले विवाह गरेकै हुन त ?
२०१८ मा हेर्नैपर्ने १० बलिउड चलचित्र
चलिचित्र सत्रुगतेको ‘रुपै मोहनी’ र चलिचत्र कृको ‘यति यति पानी’ यो हप्ता युट्युब मार्फत रिलिज भए । रिलिज भएदेखि नै दुबै गीतले युट्युब ट्रेन्डिङमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका छन, यति यति पानी अहिले ट्रेन्डिङको शिर्ष स्थानमा छ भने रुपै मोहनी दोस्रो । गितहरु भिन्नाभिन्नै छन एउटा पार्टि सङ्ग छ भने अर्को भजन शैलीमा छ । तर, दुबै गीतमा एउटा समानता छ त्यो हो बलिवुडको प्रभाब ।
रुपै मोहनीको सङ्गीत तथा शब्द भजन शैली भएपनी दृश्य भने बलिवुडको बिहेमा नाचिने गीतमा जस्तै छ । कलाकारहरुले लगाएका कपडा देखि, लाइटिङ सम्म सबै उतैबाट नक्कल गरिएको छ । के हाम्रो नेपाली संस्कृति यति खोक्रो भैसकेको हो र ? प्रश्न यहाँ उठ्न जरुरी छ ।
उता कृको ‘यति यति पानी’को हालत पनि उस्तै छ । पार्टी सङ्गको नाममा सबि कुरा बलिवुडमा प्रभाभित छ डान्सस्टेप देखि धेरै कुरा बरुन धवनले नाचेको स्याटर्डे बाट एकदमै प्रभाभित छन । के हामीसङ्ग कलात्मक क्षमताको कमि भएकै हो त ?
Related Itemsmain post
प्रेमगीत-३ को सानो गीतमा आईन निकै क्यूट सम्बृद्धि शाही ठकुरी
यस बर्षको बहुप्रतिष्ठित प्रतिक्षारत नेपाली कथानक चलचित्र प्रेमगीत ३ मा बाल कलाकार प्रेम र गीतको रोलमा अनुभव रेग्मीलाई प्रेमको रोलमा यस...
khabarxpress२०७६, ३१ असार मंगलवार १७:५६
बलिवुडकी चर्चित नायिका अमिशा पटेल नेपालमा
बलिवुडकी चर्चित नायिका अमिशा पटेल भैरहवामा हुने कार्यक्रमको लागि नेपाल आएकी छिन् उनीले सामाजिक सन्जालमा लेख्दै आफु नेपाल आउन पाएकोमा निकै...
khabarxpress२०७६, ३१ असार मंगलवार ०६:०४
पूर्वराजाबाट बाढी पहिराेले पुर्याएको क्षति प्रति दु:ख व्यक्त
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट बाढी पहिराेले पुर्याएको क्षति प्रति दुख व्यक्त गर्दै मौसमी बर्षा संगै देशका बिभिन्न भागमा आएको बाढी पहिरोको प्रकोपले...
khabarxpress२०७६, ३१ असार मंगलवार ०३:४०
अभिनेत्री शिल्पालाई छबिले आफ्नो अदालतमा बोलाए
नायिका शिल्पा पोखरेल र उनका श्रीमान् छवी ओझाबीच सतहमा आएको विवाद तत्कालका लागि छलफलबाट टुंगिएको छ। तर बाँकी जीवन उनीहरुले सँगसँगै...
khabarxpress२०७६, ३१ असार मंगलवार ०३:१३
पत्रकारलाई अौलो ठड्याउदै मन्त्री महासेठले भने क्यामरा बन्द गर्नुस्
नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयमै आयोजना भएको नेपाली कांग्रेस नुवाकोटले अवरुद्ध काठमाडौं–नुवाकोट सडक सञ्चालनका लागि ज्ञापन...
khabarxpress२०७६, ३० असार सोमबार ०३:४१
मन्त्री लालबाबु पण्डित सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलबाटै लखेटिए
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलबाटै लखेटिएका छन् उनी पहिला निकै चर्चित मन्त्री थिए अहिले उनको कार्यशैली...
khabarxpress२०७६, २९ असार आईतवार ०८:०८